Clam Elite, imwe sarudzo neANC nerubatsiro rweFresh´n Rebel | Gadget Nhau
Kushanda ruzha kukanzura, kuri kuzivikanwa se ANC yezita rayo rinodudzirwa muChirungu, chave chikumbiro chevanogadzira zvigadzirwa zvedhiyo izvo zviri kuwedzera kurongeka kwezuva, izvo zvakaitika nekuburitswa kutsva kweFresh'n Rebel, kambani yekuti kubva pano isu tateedzera nguva dzose, saka isu haikwanise kupotsa musangano.
Isu tinokuratidza iyo Clam Elite nyowani kubva kuna Fresh´n Rebel, musoro wemusoro une ANC nezvimwe zvakawanda zvinoshamisa zvehunyanzvi. Gara nesu uye uwane zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo nyowani nyowani Yekunze pamusoro-nzeve mahedhifoni.
3 Ruzha kukanzura uye modes
4 Yemunhu Ruzha app uye ruzha mhando
Fresh´n Rebel inoramba iri yechokwadi kune kukosha kwayo, zvese maererano nerudzi uye zvigadzirwa. Aya maClam Elite anoteera kuwirirana kwemavara, achipa matema, machena uye machena matoni. Nenzira imwecheteyo, ine akateedzana epurasitiki uye matimu anoteedzera simbi. Nekudaro, izvi zvinoita sekunge zvinokanganisa iko kuvaka kwese, uko kunonzwa kusimba uye mhando. Kunyangwe izvi, nekuda kwepurasitiki yakagadziridzwa maererano nehuremu. Aya maClam Elite haana kurema nekuenderera mberi nekushandisa mune yedu ruzivo.
Inosanganisira nylon yakarukwa USB-C tambo
Inosanganisira 3,5mm Jack chiteshi uye nylon yakarukwa AUX tambo
Inosanganisira kutakura bhegi
Bhandi remusoro rakagadzirwa nemachira uye rine ndangariro furo yakaturikidzana mukati kuti zviite nyore kuisa. Zviripachena isu tine yakajairika telescopic system mune iyi mhando yehedhifoni kuti tigadzirire musoro wedu. Kune chikamu chayo, mahedhifoni anofukidza nzeve zvizere ane chekuedzesera cheganda kufukidza, kutenderera nerusununguko rwekufamba uye anotakurika
Muchikamu chino takawana iyo yekubata panhare pane yekunzwa rubatsiro, pamwe neiyo ANC activation / deactivation bhatani, iyo ON / OFF bhatani uye USB-C chiteshi chatichabhadharisa chishandiso. Kurema kwese kunongoita magiramu 260 chete.
Zviripachena, seasina waya mahedhifoni izvo zvavari, isu tine Bluetooth yekubatana neiyo kifaa, kunyangwe isu tichigona zvakare kutora mukana kune hunhu hwayo yakasarudzika kurira kunyorera kwatinozotaura nezvayo gare gare. Muchikamu chino iyo Clam Elite ye Fresh´n Rebel vane Dhijitari Inoshanda Noise Kanzura, ichipa ruzivo rwepamusoro. Izvi zvinowedzeredzwa nenhevedzano yemamodhi atichataura nezvayo gare gare.
Tine chiteshi che USB-C chatinogona kubhadharisa mahedhifoni uye izvo Vane maawa makumi mana ekuzvimiririra mumimhanzi yekutamba, iyo inozoderedzwa kusvika kumaawa makumi matatu kana isu tichiita kudzimisa ruzha. Iko kubhadharisa kuzere kweaya maClam Elite kubva kuFresh'n rebelde kunotitorera angangoita maawa mana, kuti tikwanise kuona kuti isu hatina chero mhando yekukurumidza kubhadharisa. Kunyangwe izvi, kuzvitonga kwakapararira zvekuti hatitomboona mamiriro ezvinhu atinogona kuchida. Kunyange zvakadaro, Sezvo isu tine 3,5mm Jack chiteshi, tinogona kuzvishandisa nenzira yechinyakare muchiitiko chekuti isu tapererwa nesimba.
Ruzha kukanzura uye modes
Mune ino kesi Fresh'n Mupanduki yakafunga kuvandudza vhezheni yeClam renji neiyi "Elite" modhi uye kune izvi yakatipa dhijitari kudzima runyararo iyo inovimbisa kusvika kusvika ku36 dBi. Mune bvunzo dzedu zvakazviratidza kuva zvakakwana, zvirinani mune yakazara ruzha kukanzura modhi. Zvinhu zvinochinja kana tashandura kune imwe nzira.
Yakajairwa ruzha kukanzurwa: Ichadzima ruzha rwese nehukuru hwepamusoro hunopihwa neClam Elite inosvika ku36 dbi
Muchiitiko cheAmbient Mode tinoona maitiro ayo anogona kukanganisa zvakanyanya toni dzemimhanzi yatiri kuteerera. Kunyangwe ichisimuka mushe, ini handidi kwazvo nzira dzakadai 'dzakajeka', kudzima ruzha kunoshanda kunoshanda nemazvo, uye ndinokurudzira kuishandisa munzvimbo yakachengeteka. Kunyange zvakadaro, Tichifunga nezvekukura kwakaita nzeve dzako muffs, isu tinotove nedhigirii yakanaka yekuzviparadzanisa kana tisingashandise ino software chimiro.
Yemunhu Ruzha app uye ruzha mhando
Aya maClam Elite anoperekedzwa neanoshamisa mashandiro ayo ekugadzirisa mhando yeruzha kuburikidza nechishandiso chinowanikwa mahara kune ese maApple neApple. Kana tangofananidza yedu Clam Elite, chimwe chinhu chakapusa nekubata pasi ON / OFF bhatani, iyo calibration system ichavhura iyo ichagara ingangoita maminetsi matatu uye iyo iri intuitive. Kana iro remibvunzo rapera, mbiri ichagoverwa kune yedu Clam Elite iyo isingazoponeswa parunhare asi pamahedhifoni ivo pachavo, kuti isu tinokwanisa kuona nekugadzirisa pese patinoda tisingarasikirwe nesetingi isu tichiishandisa.
Bata pani sisitimu yekugadzirisa multimedia zvemukati uye vhoriyamu
Kuiswa kwekumiswa kuti umise mimhanzi otomatiki
Kune chikamu chayo, mhando yemutinhimira inosiyana zvakanyanya kana isu takavayera uye kana zvisiri. Mune yangu kesi, ini ndaona kuwanda kwakanyanya kwemabhass mushure mekuyerwa, saka ndakasarudza yakajairwa modhi, ngatiti ivo vanosvika zvakaringana zvakaenzana seyakajairwa. Hatizive kuti ivo vane aptX codec. Ivo vanotipa basa rakanaka mumabhass uye nepakati, zviri pachena kuti vanotambura nehurefu, kunyanya kana tikatama kubva kumimhanzi yekutengesa, sezvazviri nemahedhifoni mazhinji erudzi urwu. Kuvimbika kwekurira kwacho kunokanganisika zvishoma kana isu tavhura nzira dzekudzimisa dzinoshanda, chimwe chinhu chiri mukati meyakajairika parameter.
Isu tinosangana neAva Fresh'n Rebel chigadzirwa chakatenderedza, simba rayo rinomira pamusoro pevasina kusimba, kunyanya nekuti ruzivo rwekubatana, kugadzirisa uye kunyaradza zvinoenderana nemhando yekuteerera, iyo kunyangwe isu tisiri mumatanho ekutanga, inopa yakaringana chiyero kune avo vashandisi kugutsikana. Mutengo wekuburitsa ndeye 199,99 euros pane zvakajairwa nzvimbo dzekutengesa dzakadai seAmazon, El Corte Inglés naFnac.
Kugadziridza kwekupedzisira: 9 June we2021
Zvakanyatsofungidzirwa kunze zvinhu uye dhizaini
Mikana yekugadzirisa odhiyo neapp
Kubatana kwakanaka uye chiitiko chekushanda
Ambient Mode inogona kuvandudzwa
Ivo vanokwanisa kupa kunzwa kwekusasimba kudiki nekuda kwekureruka
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Clam Elite, imwe sarudzo neANC nerubatsiro rweFresh'n Rebel
Amazon Echo Ratidza gumi, skrini, ruzha uye hunyanzvi, zvakakosha here?